Mamulka madaxwayne Mustafe Cagjar maxaa ka Khaldan? – Xeernews24
Maqaalkaygii hore waxaan ku xusay habka uu MW Mustafe golaha wasiirada ku xushay iyo inay yihiin kuwo lagu hongoobay isna haadaan ka tuuraya. Waxaan ku xusay Madax-xafiiseedyadii ay soo dhiseena inay iyaga lamid yihiin.
Haddaba waxaan tusaale u soo qaadanayaa caawa ninka gudoomiyaha looga dhigay Deg. Dhooba-wayn Axmed Sagal Daahir (Gaagaale) iyo dhibka uu ku hayo dad-waynaha degmadaas.
Gaagaale maamulka Mustafe ka hor muxuu ahaa?
Gaagaale wuxuu ahaa nin Tigreegii iyo Cabdi Iley soo carbisteen, wuxuuna markii hore noqday madaxa maleeysiyada waxay ugu yeedhi jireen, kadib markuu Finixaarkii arkay inuu waraabe yahay dad cunnimada ku haboon wuxuu u dalacsiiyay Hoggaanka Nabad-galiyada waxay ugu yeedhi jireen ee isla Deg. Dhooba-wayn, halkaasoo uu gabood fallo xun-xun ka gaystay, dhiig badanna qawlalaha darsaday.
Kadibna wuxuu u dalacsiiyay Gudoomiye Degmada Dhooba-wayn, isaga oo halkaa ka sii laba jibbaaray halaaggii uu ku hayay shacabka Dhooba-wayn.
Kadibna kolkii uu Cabdi Iley billaabay wixii la odhan jiray dib-u-curasho wuxuu Gaagaale u wareejiyay Deg. Sagag isaga oo uu ku magacaabay mar kale Gudoomiyaha Deg. Sagag. Wuxuuna xasuuq aan la qiyaasi karin u gaystay shacabkii ku dhaqnaa Deg. Sagag.
Gaagaale isaga oo afka iyo afarta addinba dhiiggu ka da’ayo ayuu is-baddalku yimid, wuxuuna maamulka Mustafe mar shanaad u sii dallacsiiyay Gudoomiyaha Deg. Dhooba-wayn!!!
Haddaba shaqadiisii dadcunnimo wax ma iska baddashay?
Jawaabtu waa maya waxba is kama baddalin, shacabka Dhooba-waynna dhibaato ba’an ayuu ku hayaa, wuxuuna ku xidhan yahay kuwii xukumi jiray ee kala firxaday iyo saraakiisha Tigreega ee jooga xarunta shidaalka ee Jeexdin.
Tigreegu mar dhexdaas ah waxay soo siiyeen intay Jeexdin ugu yeedheen gaadhi nooca Qooqanta Soomaalidu tidhaahda ah, waxayna ku amreen aagga shidaalka ee ay joogaan wixii dad iyo duunyo aha ee km badan u soo jirsada xasuuq (Kiiloo mitirrada ay u sheegeen tiradooda ma hayo wax aan ii saxnayn inaan qorana ma doonayo).
Waxaa daliil kuugu filan inuu ka amar qaato firxadkii Cabdi Iley, Onlf oo Adis-Ababa si heersare ah Itoobiyada Dr. Abiye ugu soo dhawaysay, MW. Mustafe iyo wafti culus oo mas’uuliyiin iyo cuqaashii Deegaanka isugu jirana ay kaga hor tageen halkaas, Jigjiga soo dhawayntii ka dhacdayna dhaayuhu arkaayeen, Gaagaale isagu Calanka Onlf wuu uga dhaartay in Dhooba-wayn laga taago!!.
Mar ay dhallin-yaro iyo wax-garad Reer Dhooba-wayn ahi kala hadleen arrinkan calanka iyo Urur weerarka wuxuu u sheegay arrinkan inuu faray Gudoomiyaha Gobolka Qoraxay Cabdiraxmaan M. Carab. Waliba Gaagaale wuxuu sii raaciyay hadalkiisa “Garan mahayee aniga unbuuba i shirqoolayay, Qabridahare oo uu joogaba calankaasi meel walba wuu sudhan yahay oo xafiisyo ayuuba Ururkaasi ku leeyahay”.
Su’aashaa uu is waydiiyay mar uu mindhaa marqaansanaa bay ka soo duushayee waxba kagama duxin oo halkiisii buu ka sii wadaa dhibaatayntii shacabka Dhooba-wayn iyo ku sii dhu’laynta askarta Tigreega ee Jeexdin joogta.
Hadaba ninka noocaas ah yaa magacaabay? Maxaase loogu xishay?
Ma dad aqoon leh oo maamul yaqaan ah baa Dhooba-wayn laga waayay?
Maxaabase hadda loogu dhayranayaa dhibaataynta dad-waynaha Dhooba-wayn?
Afartaa su’aalood aan jawaab kaa siiyo ee horta waxaa magacaabay Wasiir Faatax oo Deg. Dhooba-wayn ka soo jeeda. Ninka noocaas ah muxuu booskaa ugu magacaabay oo uu ugu xishayba inta aada is waydiinin, horta Wasiir Faatax waa kuma? Markaad Faatax ogaato waxa uu yahay sababtaba u baahan maysid?
Wasiir Faatax waa nin xertii Tigreega iyo Cabdi Iley carbisteen ah, Systemkoodiina xataa wasiir ka soo noqday!! wuxuuna ka mid ahaa kooxdii Cabdullaahi Itoobiya horjoogaha u ahaa ee sii soco soo soco ay ugu yeedhi jireen Cabdi iyo canaasiirtiisu.
Wasiir Faatax wuxuu ka mid yahay dadka uu Mustafe xilka ugu dhiibay Cabdi Iley mayna isku fiicnayn!!! isaga oo xasuuqyadii iyo wuxuu Cabdi Ilay danbi gaystayba qayb ka ahaa Faataxna!!!
Su’aashii ahayd ma wax dhaamaa Dhooba-wayn laga waayay? Maya ee aqoonyahankii Degmadaas shaqo la’aan bay darbiyada la tuban yihiin!!. Waxaana Gaagaale meesha ku haya Faataxii keensaday oo ay dhiil musuq-maasuq is kula jiraan iyo dhagar-qabenimo!!.
Faatax waxaan waxba dhaamin Wasiir Cabdi Hurre oo shacabkii Qoraxay madaxa isu galiyay qaybtii Faatax loo diray mooyee qaybtii kale ee isaga loo diray. Dhibkaana waxaa sababay tallaabadii khaldanayd ee wasiir 11 gobol la rabay inuu wasiir u noqdo gobolkuu ka soo jeeday wasiir looga dhigay kadibna eex iyo guruubaysiga iyo dhiiqada dhex-fadhiistay.
MW. Mustafow Soomaalidu waxay ku maahmaahday “Doqontu xadhiggii lagu xidhi lahaa xusulladay ku sidataa” ee waxaad dhoob-dhoobatay baa dhiiqo kugu fadhiisinaya ee ma is daba-qaban? Kuwan kaligoodna ma ahee maamulkaaga intiisa badan, wasiir, ku xigeen iyo wixii ka hooseeya waa wada “Naari meel qaboow ma leh”. Inayba xilal wasiirnimo sii hayaan daayee xisbiga faasidka ah ee la dhoob-dhoobayo haddii lagu dhex-arkana waa maalintay kuu dhamaan lahayd.
Madaxwayne way is dhex-yuururtaa tani haddaad dhugan kalaamkayga.
W/Q: Cabdixakiim Maxamed Haadi
Hogaamintii xisbiga oo Qarka u saaran inay Jaha cusub u wareegto. Xidhiidhka Maamulka Somaliland iyo Djibouti, ( Goofka Danleyda Gaarka ah)